Mas’uuliyiinta Safaarada Soomaaliya ee Kenya Oo Booqday Maxaabiis Soomaali ah oo Ku Xiran Xabsiga Kamiti ee Nairobi”Sawirro” – Radio Muqdisho
Mas’uuliyiinta Safaarada Soomaaliya ee Kenya Oo Booqday Maxaabiis Soomaali ah oo Ku Xiran Xabsiga Kamiti ee Nairobi”Sawirro”
Maxaabiistani soomaalida ah oo gaareysa 15 maxbuus,islamarkaana muda u dhaxaysa 5 ilaa 7 sano ku xirnaa xabsiyo kala duwan oo ku yaala gudaha dalkani kenya ayaa waxaa loo haystay falal burcad badeednimo ah, waxaana hada ay dhamaysteen intooda badan mudadii xukun ciqaabeedkoodu ahaa, waxayna hada ku jiraan Xabsiga KIMITI oo ku yaala duleedka magaalada Nairobi,halkaasi oo ay ku sugayaan diyaarinta safaradii ay dib ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo.
Mas’uuliyiin ka socday safaarada Soomaaliya ee dalkani kenya oo uu kamid ahaa sii-hayaha xilka safiirka Siyaad Maxamud Shire iyo xubno ka socday hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan danbiyada ayaa maanta ku booqday maxaabiistan soomaalida ah Xabsigan ay ku jiraan.
Mas’uuliyiinta hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan danbiyada iyo mas’uuliyiinta safaarada soomaalida ee dalkani kenya ayaa ka wada shaqaynayo sidii dib loogu celin lahaa dhalinyadan dalkooda hooyo, looguna fududeyn lahaa sharciyadii ay dib ugu socdaali lahaayeen.
Mas’uuliyiinta safaarada ayaa maxaabistan ka soo qoray magacyadooda si ay ugu fududeyso waraaqihii ay uga bixi lahaayeen dalka Kenya.
Qaar kamid ah maxaabiistan oo la hadlayey warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay dhibaato farabadan la kulmeen mudadadii ay ku jireen xabsiyada kala duwan ee dalkani Kenya,haatana ay aad ugu faraxsanyihiin maadaama dib loogu celinayo dalkoodii hooyo.
Abdirahman Omar Abdi ( Abdirahman Somali )
Madaxweynaha:’Marna raali kana nihin derbiga laga dhisayo xadka Soomaaliya iyo Kenya”-Sawirro